Kwete 3D cockpit mushure mekuisa Airbus A330 Multi-Livery pakiti
mubvunzo Kwete 3D cockpit mushure mekuisa Airbus A330 Multi-Livery pakiti
1 gore 6 ago #703 by Acerazus
Ndinotanga kuisa Airbus A330 Multi-Livery pakiti, ipapo ndinoisa Airbus A340 Mega Package Vol 1. Pashure, ndinoisa Airbus A340 Mega Package Vol 2. Nenguva isipi A330 neA340 (Vol. 1) havasisinazve mapoka avo e3D! Ndakaedza zvose zvakadai sekudzorera uye zvakadaro uye iniwo ndakashandisa chigadziro cheGauge asi iyo haina kubatsira zvishoma. Chero rubatsiro runogona kudiwa zvikuru.
1 gore 6 ago #711 by ricsmi
Ndiri kuwana dambudziko rakadaro, rubatsiro rungarumbidzwa kubva kune ani zvake.
1 gore 6 ago #712 by Dariussssss
Mvumo kune vose vaviri uye kugamuchira.
Dzimwe ndege dziri mumutambo dzinobva kuPOSKY, uye hadzina VC. Avo vanobva kuna Thomas Ruth vanezvo.
1 gore 6 ago #717 by ricsmi
Dariussssss akanyora: Mharidzo kune imi mose uye mugamuchire.
Wongai nokuda kwemupinduri, pane zvakadaro here kuti uite saizvozvo ivo vane POSKY vane VC?
Time chokusika peji: 0.283 mumasekonzi